2. Izy io dia mampiasa fitaratra mangarahara borosilicate avo, rakotra mangarahara atomization ary famolavolana anti-glare, mahatohitra angovo mahery vaika, manohitra ny hafanana hafanana, ary ny fampitana hazavana dia hatramin'ny 90%.
3. Stainless vy miharihary fasteners amin'ny avo harafesiny fanoherana.
4. Teknolojian'ny herin'ny fiara mandroso, fidirana midadasika midadasika, miaraka amin'ny tsy tapaka ankehitriny, fiarovana amin'ny faritra misokatra, fiarovana amin'ny faritra fohy, fiarovana amin'ny fiakarana ary asa hafa.
5. Ampifandraiso ireo maody LED marika iraisam-pirenena maromaro, teknolojia fizarana hazavana mandroso, hazavana ary hazavana mihitsy aza, vokatra maivana 120lm / w, loko avo lenta, fiainana lava, fiarovana maitso sy tontolo iainana.
6. Ny rivotra mitarika rivotra mampangotraka amin'ny rafitra fitarihana rivotra dia afaka miantoka ny fiainan'ny loharanon-jiro LED.
1. Mifidiana tsirairay araka ny fitsipika ao amin'ny hevitry ny modely voafaritra, ary ampio ny fipoahana-porofo marika aorian'ny hevitry ny modely voafaritra.Ny embodiment manokana dia: "modely vokatra - kaody famaritana + marika tsy misy fipoahana + habetsan'ny baiko".Ohatra, raha ilaina ny jiro valin-drihana misy fipoahana 30W ary ny isa dia 20 sets, ny famaritana modely vokatra dia: Modely: BAD63-Specification: A30X+Ex d mbIIC T6 Gb+20.
Modely Implication Features 1. Izy io dia vita amin'ny firaka aluminium amin'ny hamafin'ny avo.Ny ivelany dia tokony ho famafazana fasika, izay mety hahatratra ny vokatry ny skid porofo.Ny loko manerantany dia argent ary manana endrika tsara tarehy.2. Ao amin'ny jiro dia manana switch magnetika, izay manana ny asan'ny mitoka-monina sy ny rano porofo.3. Izy io dia mampiasa bateria tsy fitadidiana avo lenta.Misy tombon-tsoa sasany amin'ny capacité lehibe a, ny androm-piasana maharitra ary ny tahan'ny fandefasana ambany.4. Mampiasa b...